May 9, 2016 – Vanoda Zvinhu
On May 9, 2016 March 1, 2018 By svirorist
Yedu yekuda kuroorwa iyi, ndainge ndaroorwa nemumwe business men wemuHarare apa ndainge ndakakurira mutown. Murume wangu mari ayinge ayinayo zvekuti zvese zvandaida andipa zvese I even had driver wangu anondiyendesa kwese kwandinoda not kuti handigone kudriver asi ndaitova nayo yangu drivers licence asi ayingoti handidi kuti ufambe wega. Murume wangu
On May 9, 2016 March 4, 2018 By svirorist
Tainge takutoziva kuti vazhinji vedu musi uyu taishanda mboro dzakamira nekupfeka kwaiyita vasikana vekubasa kwedu.Janet ainge ane mazamu mahombe zvekuti chero chainge akapfeka mboro yaitomira chete. Musi uyu Janet akauya akapfeka tracksuit Adidas yainge yakabata pese, beche rake taitowoneka kudhinda pamberi pese rakaita V zvekuti murume wese akaswera akayeverwa naJanet.
Kutsvaga mari kunomboita kuti munhu ashaye kana nguva yekuzorora kana kutandara nevamwe. Pamba pandairoja ndaingoona landlord kupera kwemwedzi chete apa girlfriend pese paaifona ndaingoti ndiri kubasa zvekuti ndakazongoona munhu akusafona ndikaziva kuti pano ndatorambwa pano.Ndakazoti ndakumutsvaga zvikanzi aaah sha inini I moved on nekuti handikwanise kumirira munhu asingagone kundipawo nguva